Isipele nokubuyisela – Windows – Vessoft
I-MiniTool Power Idatha Ukubuyiselwa kabusha – isofthiwe esisebenziseka kalula ukuthola idatha yezinhlobo ezahlukene kukhompyutha yakho nezithwali zedatha ezahlukahlukene. Isoftware isekela imishini yokushayela kanzima kanye nezinhlobo zamafayela ezinhlobo ezahlukahlukene.
I-AOMEI Backupper – isoftware ivumela ukwenza isipele nokubuyisa uhlelo olusebenzayo, ama-hard drive noma ama-partitions futhi ihlanganisa amadiski ngaphandle kokwenza ifayela lesithombe.
Isofthiwe ukuze alulame idatha esilahlekile hard drive, ngemoto flash kanye ngemoto optical. Futhi isofthiwe isekela ifayela izinhlelo ethandwa.
I-GoodSync – isoftware yokuvumelanisa idatha phakathi kwekhompyutha yakho namanye amadivaysi. Futhi, isekela ama-backups kumaseva ahlukile.
I-AOMEI OneKey Ukubuyisa – isofthiwe yakhelwe ukwenza isipele nokubuyisela uhlelo ngokuchofoza okumbalwa ngaphandle kokusebenzisa imidiya esebenzayo.
Lena isofthiwe yokuthola idatha yezinhlobo ezahlukene ezibangelwa ukususwa ngengozi, ukuhlaselwa igciwane noma ukulimala kanzima disk.
I-Disk Drill – isofthiwe yokuthola kabusha idatha elahlekile yamafomethi ahlukile kusuka kukhompyuter futhi ixhumeke kwizithwali zayo zangaphandle.
Lena isethi yezinhlelo zokusebenza nezinsiza zokuhlola, ukuxilonga nokulungisa izinkinga ezahlukene zekhompyutha.
I-Exiland Backup Free – isoftware yokusekelayo idatha. Isoftware inika amandla wokonga amakhophi wesipele ku-carriers, umshini wendawo noma amaseva we-FTP.
Ukuvuselelwa Kwefayela le-Auslogics – isoftware yokuthola kabusha amafayela asuswe noma alahlekelwe ngengozi. Isoftware inesistimu yokucinga eguquguqukayo esindisa isikhathi kakhulu ekufuneni imininingwane edingekayo.
Isisetshenziswa se-Effector – isoftware yakhelwe ukusiza imininingwane ye-1C: isoftware yebhizinisi, amafayela omuntu uqobo noma imininingwane ye-SQL.